Fampitandremana P3D mpampiasa
Important Fampitandremana P3D mpampiasa
1 taona 7 volana lasa izay - 1 taona 7 volana lasa izay #1067 by DRCW
Amin'izao aho izao dia azoko antoka fa maro aminareo no efa nahare momba ny Dovetail fanafoanana ny Flight Sim World (FSW) tsy hiresaka momba ny antony tsapako fa tsy nahomby ity programa ity. Ny mampanahy dia ireo tranga niseho tao amin'ny pejy facebook FSW nandritra ny volana 2 farany talohan'ny nanesoran'izy ireo ny vokatra. Andro isan'andro Dovetail sy FSW niezaka nivarotra. Raha ny tena izy ireo dia niresaka ny ho avin'ny sidin'izy ireo simulator 2 andro talohan'ny nilazany fa tsy ho voavoatra intsony ny vokatra.
Ka ny mampanahy ahy dia tsy maintsy efa tonga hatramin'ny faran'io i Dovetail tamin'izay fotoana izay fa hisintona ilay plugs izy ireo. Niezaka nitady vola bebe kokoa ry zareo talohan'ny nanaovan'izy ireo izany zavatra tsy misy dikany izany raha manindrona an'io hira io. Ity dia andrana hanamboarana vola amin'ny fividianana ny zon'ny fialamboly avy amin'i Microsoft. Raha ny marina dia mbola amidy FSW izy ireo amidy amin'ny setroka mandra-pahatongan'ny May 24th. Inona no ambaran'izany aminao?
Ny tahotra ahy dia mety hanandrana manenjika an'i Lockheed Martin izy ireo noho ny tsy famerenany ny fahazoan-dàlana mba ahafahana manangona bebe kokoa ireo very ireo amin'ny filazàna fa nahatonga ny tsy fahombiazan'ny FSW. Izany dia hanery an'i Lockheed Martin hanala ny fahazoan-dàlana akademika sy handratra ny mpampiasa farany ary mety hampiakatra ny vidiny izy ireo handoavana ny fitarainan'ny fahasimban'ny Dovetail.
Dovetail dia tavy matavy misy ao amin'ny vondronay ary efa nanimba ny fialambolinay sahady. Ny safidy hafa dia ny hoe Voatosika hisintona ny plug ao amin'ny sehatra ESP hafa amin'ny simulation sidina. Raha mitranga izany, ny X Plane dia ho lasa monopoliana amin'ny PC Flight Simulation. Monopole toy izany dia ho ratsy ho an'ny mpampiasa farany. Mila orinasa fakan-jaza roa farafahakeliny no misy isika, mba hampiroborobo ny fifaninanana mahasalama, ary hitohizan'ny fampandrosoana fahatelo
Last edit: 1 taona 7 volana lasa izay DRCW. Antony: Manadino ny namoaka ny mpikirakira antoko fahatelo
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: pauand2, donran1
Misaotra anareo nandray: 3
1 taona 6 volana lasa izay #1090 by StonewallUSMC
Nolazain'i Ive izany, ny karazany mahatsikaiky azy FSX ary nianatra programa avy amin'ny fototra hatramin'ny farany? folo taona. Ny vitsivitsy taminay dia nahalala efa ho herintaona talohan'ny nialan'ny GameSpy fa hitranga. Ity toe-javatra ity dia toa mitovy amin'ny fanananao maro izay manohintohina ny indostria amin'ny hetsika tsy etika. Mbola mino aho fa ny olona efa an-tapitrisany maro no mitondra an'ity sehatra ity amin'ny haavon-javatra ankehitriny dia azo atao amin'ny endriny 28% amin'ny zotram-piaramanidina ambony indrindra 40% ho an'ny mpijery finday ary ny ambiny dia ireo hafa rehetra izay ao anaty freeware sy shareware izany no nametraka ny ambaratonga sy ezaka lehibe indrindra. Betsaka ny fanararaotam-pahefana ao amin'ny kianja ara-bola. Tsy handeha hilaza anarana aho, fa hiaro ny tranokala tsy misy ifandraisany amin'io fanambarana io. Manana orinasa manala trosa tena tsara ianao, ary eny, maro be ny glitches ao amin'ity fiaramanidina tsara tarehy ity ary inona no fitaovam-piadiana velona, ​​AZO mandoa ireo mpampiasa / mpividy vidiny sy paositra vaovao isan-taona amin'ny zavatra novidinao ary avy eo ny zava-misy anao. alefa any amin'ny forum mba hahazoana valiny. Izy ireo dia manome ny vola hamaliana ny fanontaniana sy mamaha ireo olana tokony hamahana azy ara-dalàna. Mamela tranonkala iray, FSXA FSX Gold FSX, misy tranokala an-tserasera iray izay efa zatra ny rehetra, manana azy ireo izy FSX Volamena amidy amin'ny $ 200.00 amerikana. Loza manokana Saingy misy ny toerana ambony toy izany izay manome zotofototra momba ny zavatra mitranga ary hanao izay rehetra azo atao mba hampahazava kokoa ny zava-drehetra ary manao zavatra tsara kokoa hatrany. Iray amin'ireo tranonkala iray izay hitako taloha tao anatin'ny TEN hanontaniana hoe, Inona no tianao ho hita nohatsarana, miavaka amin'izao vanim-potoana sy vanin-taona izao. Mankasitraka fisaorana betsaka an'ireo rehetra teo alohanay izahay ary ho avy manaraka anay hitohy ity fiainana ity, ary hanohy hianatra ireo fidirana sy ivelan'ny fandaharana hianarana ireo teknika. Ny simulation sidina dia nitondra olona maromaro kokoa tao amin'ny indostrian'ny aerospace fa tsy nisy hafa tamin'ny tantara. Ny ankamaroan'ireo izay mivoaka eto dia hanidina amin'ny sekoly sidina. Ny hoavin'ny fiaramanidina sim tsy mijery vazivazy, ny mahery ihany no ho velona ao amin'ny indostria satria izay miditra dia mitady tombony fotsiny ary miaraka irery ao an-tsaina fa tsy ny mpamorona sim flight, mpampiasa, mpamorona sns, ary tsy mianatra mihaino ny ireo sidina ampahibemaso dia tsy hahomby, afaka manome toky anao izany aho. Mahatadidy aho rehefa nivoaka ny sim-piaramanidina MS voalohany, fa vaovao fa ambony noho izany izy io, ary miverina mitodika ireo fandaharana ireo aho, satria ny lalana PONG no nialoha azy. Manorata fototra mafy ahafahana manohana ny trano, ampaherezo ary matanjaka tsara mba hifehezana ny zava-drehetra fa tsy iray akory, satria raha tsy manaiky izany zavatra iray izany dia hampidinina ny trano, misaotra RIKOOOO amin'ny toerana tsara, toerana ahatongavanay afaka miangona ary manamboatra sim ho toerana tsara kokoa. Manana fiaramanidina azo antoka.Semper Fidelis. Raha mipoitra izany tarehimarika izany dia fantaro fa misy sary momba ny 300G intel duo momba ny 7 efa 10 taona lasa mandeha amin'ny varavarankely 7
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: DRCW, donran1
Fotoana mamorona pejy: 0.161 segondra